Britain: “Software” kala sooci doona runta iyo beenta siyaasiyiinta – Kasmo Newspaper
Britain: “Software” kala sooci doona runta iyo beenta siyaasiyiinta
Updated - August 10, 2017 6:42 pm GMT
London (Kasmo), Warfidiyeennada ka hawlgala warbaahinta Britain ee Tv-ga, Wargaysyada la daabaco iyo Baraha Internetka ayaa awood u yeelan doona in ay kashifaan wararka beenta ah (Fake News), iyaga oo hadda helay ciddii laga kaashan lahaa.
Ururka “Full Fact” oo ka shaqeeya hubinta wararka “Fact-checking” ayaa dhowaan hirgaliyay “Software” kala xaqiijinaya beenta iyo runta siyaasiyiintu ka sheegaan warbaahinta iyo marka Barlamaanka ay joogaan.
Sambal hore oo Hannaankaas ah waxaa la shaacin doonaa laga bilaabo bisha Oktoobar, waxaana lagu magacaabaa “bullshit detector”, oo ah tijaabo an ku koobnayn Britain oo qur ah, ee u gudbi doonta K/Amerika iyo Afrika.
Halkaas oo Ururku kala hawlgalo dhiggiisa qaaradahaas oo kala ah “Chequeado”oo fadhigiisu yahay Argentina iyo “Africa Check” oo ka hawlgala dalalka Sub Saharan Afrika oo ay ku jiraan Nijeeriya iyo Koofur Afrika.
Barnaamijkan waxaa $ 500,000 oo Dollar ku hirgaliyay Cilmi-baarayaasha Full Fact, waxaana maalgaliyay Hay’ado samafal oo taageero ka helaya 2 nin oo maalqabeenno sare ah: Ganacsadaha weyn George Soros iyo aasaasaha Barta Naadada Internetka e-Bay, Pierre Morad Omidyar.
Hannaanku, sida Wargayska Guardian ku qiimeeyay wuxuu wada eegayaa wararka siyaasiyiintu ku hadlaan, isaga oo oggolaanaya sidii qaab-gacmeed loogu xaqiijin lahaa xaqiiqadooda, laakiin noocyada dambe ee Hannaanku waxay awood u yeelan doonaan in ay si toos ah (automatic) galaangal ugu yeeshaan xogaha rasmiga ah.
Nooc kale waxaa loo adeegsan kari doonaa marka ay socdaan doodaha siyaasiga ah ee Tv-ga, waxaana iyada oo la adeegsanayo “Pop-up” si toos ah loo kashifi karaa xaqiiqada ama beenta wararka.
Maamulaha Barnaamijka, Mevan Babakar, ayaa London ka sheegtay in ay la mid tahay dhismaha habka difaaca jirka oo kale: mar kasta warar badan oo khaldan ayaa dunida lagu baahiyaa, waxa maqanna waa qalabkii la isaga difaaci lahaa.